कुन चरामा के विशेषता पाइन्छ ? – Lokpati.com
राशिफल प्रचण्ड नेपाल प्रहरी नेकपा पक्राउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका अपराध नेपाली काँग्रेस सरकार मृत्यु
कुन चरामा के विशेषता पाइन्छ ?
काठमाडौं । पंक्षीहरुले कुनै पनि बस्तुको स्वाद लिन सक्दैनन् । चराको स्वाद ग्रन्थि हुदैन । नेपालमा ८ सय ८६ प्रजातिका चराहरु पाइन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढि चरा पाइने स्थान अरुण उपत्यका हो । नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हो । उत्तराखण्डमा पनि डाँफे नामले नै चिनिन्छ । उत्तराखण्डको प्रान्तीय पंक्षी हो । डाँफे विशेष गरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ ।
विश्वको सबैभन्दा सानो चरा बि हमिङ वर्ड हो । पछाडि पनि उड्न सक्ने पंक्षी बि हमिङ वर्ड हो । सबैन्दा ठुलो चरा अष्ट्रिज चरा हो । सबैभन्दा ठुलो फुल पार्ने चरा सुतुरमुर्ग हो । सबेभन्दा बढी फुल पार्ने चरा तित्रा हो । स्तनधारी चरा चमेरा हो । चारैतिरबाट टाउको घुमाउन सक्ने चरा उल्लु हो ।
फुल पार्दा उभिने चरापेइगुन हो । सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा अल्बाट्रस हो ।सबैभन्दा छिटो उड्ने चरा चील हो ।चीलको चुच्चोलाई बन्दुकको गोलीले पनि छेड्न सक्दैन् । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा १६ सय किलो वजनको चीलको गुँड छ । नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडेभ्याकुर हो । आफ्नो गुँड सिउने चरा तोप चरा हो । आफ्नो गुँड नबनाई अर्काको गुँडमा फुल पार्ने चरा कोइली हो ।
प्राकृतिक कुचिकार भनेर चिनिने चरा गिद्ध हो । सबैभन्दा धेरै बाच्चने प्राणी कछुवा हो । सर्प नपाइने देश आइसल्याण्ड हो । लामखुट्टे नपाइने देश फ्रान्स हो । सरिक प्रणालीले नुनिलो पाकनीलाई पनि शुद्ध पानीमा परिणत गर्न सक्दछ । संसारमा लगभग एक खर्ब पंक्षीहरु रहेका छन् । जिपर नाम पंक्षीले सुरक्षाको लागि आफ्नो पानीको झरनाको पछाडि बनाउछ । सामुद्रिक चरा यस्तो चरा हो जसले नुनिलो पानी पनि पिउन सक्छ ।
शान्तिको प्रतीक मानिने पंक्षी परेवा हो । परेवाले अल्ट्राभाइलट विकिरण देख्न सक्छन् । परेवा घरपालुवा पंक्षी हो । पखेटा नहुने पंक्षी किवि हो । न्यायको प्रतीक मानिने पंक्षी हाँस हो । काँचुली फर्ने माछा डल्फिन हो । विश्वको माछा नपाइने नदी जोर्डन हो । टाउकोमा गर्भधान हुने जीव उडुस हो । बुद्धि र विवेकको प्रतीक मानिने पंक्षी लाटोकोसेरो हो । लाटोबमेसेरोको दाँत हुदैन । भाले लाटोकोसेरोको तौल र आकार पोथी लाटोकोसेरोको भन्दा कम हुन्छ ।
पेटमा दाँत हुने जीव गँगटो हो । नेपालमा पोखराको फेवा तालमा माछा सङ्ग्रालय रहेको छ । नेपालको पुतली सङ्ग्रालय पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा रहेको छ । नेपालको सर्प सङ्ग्रालय दमक झापामा रहेको छ । नेपालमा मात्र पाइने पुतली पोन्टिया शेर्पा हो । धमिरम बस्ने स्थानलाई देवल भनिन्छ ।
नेपालमा मात्र पाइने किरा आप्तागोस्तर नेपालीसिन्स र कालिसनेभिस हो । सेतो रगत हुने जीव साङ्लो हो । विश्वमा सबैभन्दा छिटो हिड्ने जनावर चितुवा हो । मानिस जस्तै हाँस्ने जन्तु हाइना हो । रातो पसिना निकाल्ने जन्तु गैंडा हो । यार्सागुम्बाको लागि प्रख्यात जिल्ला डोल्पा हो । कुखुराको वंशाणुगत स्रोत लुइचे हो ।
गोही प्रजनन केन्द्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ ।मृग अध्ययन केन्द्र ललितपुरको गोदावरीमा रहेको छ । हात्ती प्रजनन केन्द्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खासोरमा रहेको छ । गिद्ध प्रजनन केन्द्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ । जटाँयु रेष्टेरेन्ट नवलपुरको कावासोति र पिठौलीमा रहेको छ । चमेरा संरक्षण केन्द्र कपिलवस्तुको देवानगढमा रहेको छ । झारल हिमाली हाब्रे लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ